မောင်ဖုန်းမြင့်: ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့ ရှိ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများနှင်. ဒုက္ခသည်များ စာရင်း
ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့ ရှိ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများနှင်. ဒုက္ခသည်များ စာရင်း
မြန်မာပြည် အခြေစိုက် ဘလော.ဂါများ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက် ကူညီလှုဒါန်း မှုများ နှင်. ဘိုကလေး မြို.နယ် အတွင်းရှိ လေဘေးသင်.ဒုက္ခသည် များ နှင်. ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း များကို ဘလော.ဂါများ ပြုစုထား
သော စာရင်းများဖြစ်ပါသည် ။ အဝေးရောက် မျိုးချစ် ရွှေမြန်မာများနှင်. ပြည်ပ အခြေစိုက် ဘလော.ဂါ များ အနေဖြင်. တိုက်ရိုက်ဖြစ် စေ ၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ဘလော.ဂါများ မှဖြစ်စေ ပူးပေါင်း ပါဝင် ကူညီ လှုဒါန်း နိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by phone myint at 11:44 PM
ဘုရားသခင် သင်.ကို မယုံကြည်တော.ပါ
ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့ ရှိ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်...